Yohane 9 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Yohane Kyerɛwtohɔ 9:1-41
Yesu saa ɔbarima bi a wɔwoo no onifuraefo yare (1-12)
Farisifo bisabisaa ɔbarima a anka n’ani afura no nsɛm (13-34)
Farisifo yɛ anifuraefo (35-41)
9 Bere a ɔretwam no, ohuu ɔbarima bi a wɔwoo no onifuraefo. 2 Ɛnna n’asuafo no bisaa no sɛ: “Rabi,+ hena na ɔyɛɛ bɔne a enti wɔwoo ɔbarima yi onifuraefo? Ɛyɛ ɔno ara, anaa n’awofo?” 3 Yesu buae sɛ: “Ɛnyɛ ɔbarima yi anaa n’awofo mu biara na ɛyɛɛ bɔne, na mmom sɛnea ɛbɛyɛ a nnipa behu Onyankopɔn nnwuma ntia.+ 4 Bere a adekyee wɔ hɔ yi, ɛsɛ sɛ yɛyɛ Nea ɔsomaa me no nnwuma.+ Anadwo reba, na obiara rentumi nyɛ adwuma. 5 Bere tenten a mewɔ wiase yi de, mene wiase hann.”+ 6 Bere a ɔkaa saa no, ɔtew ntasu too fam, na ɔde ntasu no fraa dɔte, ɛnna ɔde sraa ɔbarima no ani so.+ 7 Na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Kɔhohoro wɔ ɔtare Siloam (a ne nkyerɛase ne “Wɔasoma”) no mu. Enti ɔkɔe, na ɔkɔhohoroe; ɔsan bae no, na ohu ade.+ 8 Na mpɔtam hɔfo ne wɔn a kan no na wohu no sɛ ɔsrɛsrɛ ade no fii ase kae sɛ: “Ɛnyɛ ɔbarima a na ɔte hɔ srɛsrɛ ade no ni?” 9 Ebinom kae sɛ: “Ɛyɛ ɔno.” Ɛnna ebinom nso se: “Daabi, sɛ na ɔsɛ no.” Ɔbarima no de, nea na ɔreka ara ne sɛ: “Ɛyɛ me ara.” 10 Enti wobisaa no sɛ: “Ɛnde ɛyɛɛ dɛn na w’ani buei?” 11 Obuae sɛ: “Ɔbarima bi a wɔfrɛ no Yesu na ɔfɔtɔw dɔte de sraa m’ani so. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, ‘Kɔ Siloam mu na kɔhohoro.’+ Enti mekɔe, na mekɔhohoroe, na mihuu ade.” 12 Ɛnna wobisaa no sɛ: “Saa ɔbarima no wɔ he?” Na ɔkae sɛ: “Minnim.” 13 Ɛnna wɔde ɔbarima a na anka n’ani afura no kɔɔ Farisifo no hɔ. 14 Yɛreka yi, ɛda a Yesu fɔtɔw dɔte na obuee n’ani no,+ na ɛyɛ Homeda.+ 15 Enti afei, Farisifo no nso fii ase bisaa no nea ɛyɛe a ohuu ade. Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ɔfɔtɔw dɔte de yɛɛ m’ani so, ɛnna mekɔhohoroe, ɛnna mihuu ade.” 16 Ɛnna Farisifo no bi fii ase kae sɛ: “Onipa yi mfi Onyankopɔn hɔ, efisɛ onni Homeda.”+ Na ebinom nso kae sɛ: “Ɛbɛyɛ dɛn na obi a ɔyɛ ɔbɔnefo atumi ayɛ nsɛnkyerɛnne a ɛte saa?”+ Enti wɔn mu paapaee.+ 17 Ɛnna wobisaa onifuraefo no bio sɛ: “Wo na wabue w’ani, enti dɛn na woka fa ne ho?” Ɔbarima no kae sɛ: “Ɔyɛ odiyifo.” 18 Nanso Yudafo no annye anni sɛ na n’ani afura, ɛnna afei wahu ade, kosii sɛ wɔkɔfrɛɛ ɔbarima a afei de ohu ade no awofo bae. 19 Na wobisaa wɔn sɛ: “Mo ba a moka sɛ mowoo no onifuraefo no ni? Ɛyɛɛ dɛn na afei de ohu ade?” 20 N’awofo no buae sɛ: “Yenim sɛ yɛn ba ni. Yɛwoo no no, na n’ani afura. 21 Nanso nea ɛyɛe a seesei ohu ade yi de, yennim, na onipa a obuee n’ani no nso, yennim. Mummisa no. Wanyin. Ɔno ara na ɛsɛ sɛ ɔka n’asɛm.” 22 Nea enti a n’awofo kaa eyi ne sɛ, na wosuro Yudafo no.+ Efisɛ na Yudafo no abɔ pɔw sɛ, sɛ obi gye Yesu tom sɛ ɔno ne Kristo a, wobetu no afi hyiadan no mu.+ 23 Eyi na ɛmaa n’awofo kae sɛ: “Wanyin. Mummisa no” no. 24 Enti wɔfrɛɛ ɔbarima a na n’ani afura no ne mprenu so, na wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Hyɛ Onyankopɔn anuonyam; yenim sɛ saa ɔbarima no yɛ ɔbɔnefo.” 25 Ɔno nso kae sɛ: “Sɛ ɔyɛ ɔbɔnefo a, me de minnim. Ade baako na minim, ɛne sɛ na meyɛ onifuraefo, nanso afei de, mihu ade.” 26 Ɛnna wobisaa no sɛ: “Dɛn na ɔyɛɛ wo? Ɔyɛɛ dɛn na obuee w’ani?” 27 Obuaa wɔn sɛ: “Maka akyerɛ mo dedaw, nanso moantie. Adɛn na mopɛ sɛ mote bio? Mo nso mopɛ sɛ moyɛ n’asuafo anaa?” 28 Ɛnna wɔyeyaw no ka kyerɛɛ no sɛ: “Wo na woyɛ saa ɔbarima no suani, na yɛn de, yɛyɛ Mose asuafo. 29 Yenim sɛ Onyankopɔn kasa kyerɛɛ Mose, na saa ɔbarima yi de, yennim baabi a ofi.” 30 Ɔbarima no buaa wɔn sɛ: “Asɛm yi yɛ nwonwa paa, sɛ munnim baabi a ofi, nanso wabue m’ani. 31 Yenim sɛ Onyankopɔn ntie abɔnefo,+ na sɛ obi suro Onyankopɔn na ɔyɛ nea ɔpɛ a, ɔno mmom na otie no.+ 32 Efi tete besi nnɛ, yɛntee sɛ obi abue nea wɔawo no onifuraefo ani da. 33 Sɛ ɔbarima yi mfi Onyankopɔn a, anka ɔrentumi nyɛ hwee.”+ 34 Wobuaa no sɛ: “Wo a bɔne mu nko na wɔwoo wo yi, wo na worekyerɛkyerɛ yɛn?” Ɛnna wɔpam no fii hɔ!+ 35 Yesu tee sɛ wɔapam no. Na bere a Yesu huu no no, obisaa no sɛ: “Wugye onipa Ba no di anaa?” 36 Ɔbarima no buae sɛ: “Owura, ɔne hena, na minnye no nni?” 37 Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Woahu no, na nokwasɛm ne sɛ, ɔno ara na ɔne wo rekasa yi.” 38 Ɛnna ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Owura, migye no di.” Na ɔkotow n’anim. 39 Ɛnna Yesu kae sɛ: “Atemmu yi nti na mebaa wiase, sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn a wonhu ade no behu ade,+ na wɔn a wohu ade no adan anifuraefo.”+ 40 Farisifo a na wɔwɔ hɔ no mu bi tee nsɛm yi, na wobisaa no sɛ: “Yɛn nso, yɛyɛ anifuraefo anaa?” 41 Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Sɛ moyɛ anifuraefo a, anka bɔne nni mo ho. Nanso seesei moka sɛ, ‘Yehu ade.’ Enti mo bɔne no aka hɔ.”+